Vaovao - Ahoana no hisafidianana chandelier? Ahoana no tokony hamporisihan'ny mpamorona endrika amin'ny tompony?
Ahoana ny fomba hisafidianana chandelier? Ahoana no tokony hamporisihan'ny mpamorona endrika amin'ny tompony?
Ny chandelier dia jiro fanaingoana malaza izay apetraka amin'ny valindrihana ao amin'ny habakabaka anatiny, dia malaza amin'ny habaka anatiny sy avo lenta (trano fandraisam-bahiny, efitrano fanaovana fanasana lehibe, sns.) Sy toerana an-trano noho ny hazavana malefaka sy ny haingo mahery. Ny fisoloana vava tsy misy jiro lehibe mandritra ny taona maro dia tsy manakana ireo mpampiasa mankafy ny jiro lehibe — ny chandelier.
Noho izany, ahoana no tokony hamporisihan'ny mpamorona endrika chandelier mety amin'ny tompony?
Voalohany indrindra, safidio ny fomba fizarana hazavana mety mifanaraka amin'ny tena filàna, satria ny fomba fizarana fahazavana samihafa dia mety hahazo vokatra hafa amin'ny jiro. Indrindra amin'ny sehatra ara-barotra, ny chandelier dia tsy tokony hifantoka amin'ny haingon-trano fotsiny, fa handinika tsara ny fepetra takiana.
Faharoa, safidio ny fomba fiakarana miorina amin'ny firafitry ny habakabaka sy ny safidinao manokana. Ohatra, ny valindrihana birao gypsum sasany dia tsy mety amin'ny fampiasana chandelier. Ny antony ara-materialy dia mety hitarika mora foana amin'ny triatra sy ny fiovana.
Ny fomba famolavolana ny chandelier dia tokony ho tsara tarehy ihany koa, tsara kokoa ny manome taratry ny fomba an-trano ary maneho ny hatsaran'ny tompony.
Raha ny marina, ny jiro sy ny endriny dia mitovy amin'ny vehivavy sy akanjo ihany. Izy rehetra dia mila ampifanarahana amin'ny antonony sy tsara. Halaviro ny fampifandraisana "noterena".
Rehefa ampiharina amin'ny tetikasa manokana dia olana roa no hitranga:
1) Firy ny chandelier mety?
Andao horaisintsika ohatra ny latabatra fisakafoana ao an-trano:
Rehefa vitsy ny isan'ny fisakafoanana ary kely ny haben'ny latabatra: asaina mametraka chandelier eo amin'ny latabatra misy savaivony 1.2m - 1.5m mba hiantohana ny famirapiratana sy ny rivo-pisakafoanana.
Mazava ho azy, raha ny latabatra fisakafoana lehibe kokoa noho ny 2m ny savaivony, dia midika izany fa foana ny habaka. Amin'izao fotoana izao dia mila soloina chandelier lehibe na chandelier kely maromaro mba hihaona amin'ny filan'ny jiro.
(2) Ahoana no hamaritana ny haavon'ny fampiatoana?
Raiso ohatra ny latabatra fisakafoana ao an-trano. Ny haavon'ny chandelier mihantona dia asaina manodidina ny 700mm ambonin'ny latabatra, ary tsy tokony ho avo loatra na ambany loatra izany. Ity haavo ity dia afaka miantoka fa tsy misy fiantraikany amin'ny fifandraisana mahazatra isika rehefa mipetraka.
Mandritra izany fotoana izany dia ampifanarahana amin'ny haavon'ny latabatra fisakafoanana mahazatra (750mm-780mm) ity haavon'ny fampiatoana ity, mba haavo ny fahitan'ny olona sy ny haavon'ny vatan-kazo rehefa mijoro izy ireo, ary tsy mora ny mahita ny jiro ny chandelier, fa koa afaka mampifantoka ny jiro amin'ny latabatra.